सरकारले गरिबक्सने भनेकै ‘केही नगरिबक्सने’ हो ! [टिप्पणी] – Makalukhabar.com
'सबै खर्च आफैँ गर्नु'
मकालु खबर	 Oct 19, 2020 मा प्रकाशित 211
काठमाडौं । सरकार त साँच्चै नै सरकारजस्तै भइबक्स्यो । सरकार त पर…बस्नुहुन्छ अनि गाउनुहुन्छ आत्मतारिफको गीत । बजाउनुहुन्छ आत्मप्रशंसाको बाँसुरी । अनि नचाउनुहुन्छ निरीह नागरिकहरुलाई छमछमी । आफूले बजाएको तालमा नाँच्ने नागरिकको मर्कासँग पूरै दूर भइबक्सन्छ सरकार । मानौं सरकार ‘निरो’ होइबक्सन्छ ।
बन्दाबन्दीका कारण खान नपाएर जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका जनताको अगाडि ठिङ्ग उभिएर सरकारले भनिबक्स्यो–‘हामी हाम्रा नागरिकलाई भोककै कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याउने छैनौं ।’
सरकारले कोभिड उन्नाइसको सन्दर्भमा निर्णय गर्दै हिजै भनिबक्स्योे–‘आफ्नो परीक्षण आफैँ गर्नु, संक्रमितहरुले उपचार आफैँ गर्नु, शव व्यवस्थापन पनि आफैँ गर्नु ।’ सरकार यति भन्नलाई भने चुकिबक्स्यो–‘अबदेखि सरकारको काम मृतक र संक्रमितको तथ्यांक राख्ने मात्रै हो ।’
केही दिन पहिले मात्रै सरकारले भनिबक्सेको थियो–‘बेहोश भइहाले वा होला होलाजस्तो भए मात्रै अस्पताल आउनु ।’ आत्मप्रशंसामा लडीबुडी खेलिबक्सेका सरकार कोरोना भाइरसले ‘धोती न टोपी’ होइबक्स्यो । कारण, जतिबेला कोरोना आइसकेको थिएन । त्यतिबेला सरकारले आँखा कमिसन र घूसतिर डुलाइबक्स्यो ।
अनि जब नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमित नागरिक भेटिन थाले । तब सरकार विना पूर्वतयारी बन्दाबन्दी गर्नुतिर लम्किबक्स्यो । त्यही बन्दाबन्दीका कारण खान नपाएर जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका जनताको अगाडि ठिङ्ग उभिएर सरकारले भनिबक्स्यो–‘हामी हाम्रा नागरिकलाई भोककै कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याउने छैनौं ।’
खैर, सरकार त के भइबक्स्यो भइबक्स्यो ? सरकार त पर बसिबक्सेको छ । अनि खेलिबक्सेको छ, सत्ताको कबड्डी । सरकार त खाली विपक्षीलाई कक्रक्कै समाउने अनि आफू पक्षलाई जसरी हुन्छ आइज मात्रै पो भनिबक्सिन्छ ।
सरकार त चीर निन्द्रामा होइबक्सन्छ क्यारे !
सरकारको यो कर्म देखेर कतिले त गाली गरे । कतिले त आलोचना गरे । कतिले पदबाट हट भनेर पनि भने । कतिले त यस्तो सरकार चाहिएन भनेर समेत भने ।
तर, सरकारले केही पो सुनिबक्सेन । सरकार त चीर निन्द्रामा होइबक्सन्छ क्यारे !
नेपाली भूमिमै कोरोनाले सयौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरुलाई लग्यो । हजारौंको संख्यामा संक्रमितहरु तुलिए । अझै मृत्युदर बढिरहेको अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई आफ्नै खुशी गर्नु, हामी सक्दैनौं भनिबक्स्यो । खैर, सरकारले गरिबक्सने भनेकै ‘केही नगरिबक्सने’ पो हो क्यारे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, दशैं भत्ताबारे निर्णय हुनसक्ने संकेत